February 9, 2020 Alinn Pya 0
ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ သမီးလေးအတွက် မိခင်ဖြစ်သူမှ ပြန်တွေ့ရန်မျှော်လင့်နေ “ငါ့သမီးလေး အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပေးပါ.. အမေတို့က သမီးကို မျှော်နေပါတယ်.. ငါ့သမီးပြန်လာရင် စီးပြီးကြိုပါ့မယ် ငါ့သမီးရယ်…” ဟု မိခင်ဖြစ်သူပြောကြား ဖေဖော်ဝါရီ(၉) AlinnMyay(အလင်းမြေ) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းကွန်းတိုက်နယ်၊ မင်းကွန်းမြောက်ရွာ၊ အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်တဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ (ဦးမြင့်ဇော်) မရှိတော့ပါ၊ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ကေသီဦး (ခေါ်) ဒေါ်ကေသီ မှ မုဆိုးမဘဝဖြင့် ရုန်းကန်ပြီး သားသမီးတွေကို ရှာဖွေ ကျွေးမွေးနေခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ […]
ဘုရားဆီသွားရာလမ်းမှာ မီးနဲ့ဆူးခက်တွေကို ဖြတ်ကျော်ရတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တို့ရဲ့ မီးနင်းပွဲ
ဖေဖော်ဝါရီ(၉) AlinnMyay(အလင်းမြေ) အိန္ဒယနိူင်ငံ၊ ချနိူင်းမြို့မှာရှိတဲ့ စူဋ္ဌာမဏိဘုရားရှင် ကိန်းဝပ်စံပယ်တဲ့ တောင်တော်ကို တက်ရောက်ပြီး ဘုရားရှင်ကို ဖူးမျှော်ဖို့အတွက် တောင်အထပ်ထပ်၊ တောင်အသွယ်သွယ် သွားလာရပါတယ်။ အဲ့ဒီလို သွားလာတဲ့နေရာမှာ တောမီးတွေ၊ ဆူးခက်တွေ စတဲ့ ဒုက္ခအခက်အခဲတွေကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ခရီးပြင်းနှင်ရပါတယ်။ အဲဒါတွေကို အောက်မေ့သတိရတဲ့ အထိမ်းအမှတ် ယုံကြည်မှုနဲ့ ကိုယ်ခန္ဒာမှာ အသားတွေကို အပ်၊ သံချွန်တွေနဲ့ ထိုးဖောက်ပြီး မီးနင်းပွဲပြုလုပ်တာဖြစ်တယ် လို့ ဘုရားကျောင်းဂေါပကတဦးက ရှင်းပြပါတယ်။ ဝေဖုန်းစံ(ပြည်) […]
ဘဝတွေ ကခါးလွန်းတယ်…ကံကြမ္မာအရပဲပေါ့ သားလေး
ဒီလိုအရွယ်ဆိုတာ ဘာလုပ်ချင်တယ် မေးလည်း သူတို့လုပ်ချင်တာ ဖြေတာပါပဲ။ နောက်ကြီးလာမှ တလွဲဖြစ်တတ်တာပါပဲ။ ပြီးတော့ ကျောင်းမနေချင်ဘူးလားမေးလို့လည်း ကလေးအခြေအနေကြည့်ရတာ ကျောင်းဆိုတာ ဘာလည်းတောင် သိပုံမပေါ်ပါဘူးဗျာ…။ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်ဗျာ …တစ်ချို့က ငွေရှိရဲ့သားနဲ့ ကျောင်းမနေချင်တဲ့ အချိန်မှာ တစ်ချို့က ကျောင်းတက်ချင်လို့ကို မတက်ရတဲ့ အဖြစ်။Thar Gyi သနားဖို့ကောင်းတဲ့ကလေးရေ ….ညီလေးရဲ့ဘဝက အဲလောက်တောင ်ဒဏ်ပိရတာလားကွာ ….ကျောင်းနေရမယ်အရွယ် ခုလိုတောင်းရမ်းစားသောက်နေတာ …. တကယ်မိခင်ဆို ကိုယ်သားတွက်ဘယ်လောက်တောင်ရင်နာမလဲ ….အော်အနာဂတ်မှာ ထွန်းတောက်ပမယ်ကြယ်လေးတွေ….ခုဆိုတစ်ချို့က မိတ်တုတ်မိတ်တုတ်ဖြစ်နေပါတော့လား…. […]
အိမ်မှာ နှင်းဆီပင်စိုက်ချင်သူတွေ သိထားသင့်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ချက်များ
အပင်စိုက်ရတာ ၀ါသနာပါတဲ့သူတွေက အိမ်မှာ ရသလိုလေး အပင်စိုက်ကျပါတယ် နှင်းဆီပင်စိုက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး သိထားသင့်တဲ့ါ အချက်လေးတွေ ဖော်ပြပေးလိုက်မယ်နော် ၁။ နှင်းဆီပင်လေးတွေက နေရောင်ကြိုက်ပါတယ်။ အရိပ်ထဲမှာ မစိုက်ပါနဲ့။ တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး (၆) နာရီလောက် နေရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့နေရာမှာ စိုက်ပါ။ ၂။ နှင်းဆီပင်ကို ရေစိမ့်ဝင်မှုအားကောင်းပြီး မြေဆီဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ မြေမှာ စိုက်ပါ။ ၃။ ရေလောင်းတဲ့အခါမှာ အပင်ခြေက မြေကြီးကိုပဲ လောင်းပေးပါ။ နှင်းဆီအရွက်တွေကို ရေမစိုပါစေနဲ့။နှင်းဆီအရွက်တွေပေါ်မှာ ရေတင်နေရင် […]
ဘန်ကောက်က ဘုရင့်သမီးတော်အငယ်ဆုံးလေး ဖွင့်ထားပေးတဲ့ အစိုးရဆေးရုံတဲ့
ဘန်ကောက်က အစိုးရဆေးရုံတဲ့ ကိုယ်တွေဆီက အထူးကုဆေးရုံတွေထက်ကောင်းနေသလို ဘုရင့်သမီးတော် အငယ်ဆုံးလေးဖွင့်ထားပေးတာတဲ့ ဈေးကတော့ ဘန်ကောက်က ပုပ္ပလိက ဆေးရုံတွေနဲ့ (၁၀)ပုံ (၁)ပုံပဲ ကျတယ်။ (ကိုယ်တွေ့) တစ်ယောက် သီးသန့်ခန်းအမေဆို ဆေးရုံမှာ (၂)ညအိပ်၊ ကင်ဆာဆေးသွင်းမှ မြန်မာငွေ (၈)သိန်းပဲကျတယ်(တခြား ဘန်ကောက်က ပုပ္ပလိက ဆေးရုံမှာဆို ကင်ဆာ ကီမိုဆေး တစ်လုံးကို သိန်း (၄၀) ကနေ သိန်း (၈၀) အထိရှိတယ်… ဒါတောင်ဆေးရုံတက်ခ မပါသေးဘူးရယ်) […]